Mankalaza Ny Faha-30 Taonan’i Akira Ireo Mpankafy Erantany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Aogositra 2018 14:02 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, नेपाली, English
Sary avy amin'ny Akira. Sary: pikantsary tamin'ny YouTube, avy amin'ny fantsona fahitalavitra Goldeneye32X
Ny 16 Jolay 2018, nankalaza ny tsingerintaona faha-30 n'i Akira ireo olompirenena erantany, sarimihetsika iray izay nanova sy namela dindo tanteraka tamin'ny sarimiaina. Mba hanamarihana ny fankalazana, nizara an'ireo sary nankafiziny indrindra avy tamin'ilay lahatsary ireo vahiny sy japoney mpankafy – sy ny antony, telopolo taona aty aoriana, mbola mampitoetra ny Akira ho tena mahavariana an'ireo olona marobe hatrany i Akira.
I Otomo Katsuhiro no nanoratra sy nitantana ny Akira, tamin'ny taona 1988 efa lasa artista malaza sahady tao Japana tamin'ny resala manga, ary nifototra tamin'ireo andianà manga malaza novokariny tamin'ny anarana mitovy amin'io ihany, izay navoaka voalohany ho toy ny andiany isambolana nanomboka tamin'ny taona 1982.
Ny taona 2019 no mitranga ny tantara ao anatina Tokyo iray taorian'ny apokalipsa, fanjakana mpitandro filaminana tsy refesimandidy iray ahitàna ny famorenana ireo fihetsiketsehana, anjakan'ny kolikoly ary endrika ivelany fotsiny ny fampiharana ny lalàna. Mitarika andiana mpitondra kodiarandroa eo an-toerana ireo mpinamana fahazaza Kaneda sy Tetsuo tamin'ny fotoana nitranganà ny lozam-pifamoivoizana nanjo ny kodiarandroa iray nampifoha ny tanjaka ara-tsaina sy fanahy nananan'ity farany farany, ho fisedràna ny fifandraisan'izy ireo sy nanohintohina ny rafitra miaramila izay mifehy azy ireo.
Tahaka ireo kolontsaina pop Japoney maro taorian'ny ady lehibe, ireo fotokevitr'i Akira mikasika ny faharavàna, ny hadisoam-panantenana, ary ny faharetana dia mampitamberina ireo tranga tena nisy tamin'ny fiainana tamin'ny taona 1945, tamin'ireo fanafihana roa nanjeran’ i Etazonia baomba atomika tamin'ireo tanàna japoney tao Hiroshima sy Nagasaki ka nahafaty teo noho eo olona 200 000 raha kely indrindra.
Na ireo andiana manga na ilay sarimihetsika tamin'ny 1988 dia samy asan-kerimpo nataon'ireo cyberpunk (mpisetrasetra) avokoa izay ahitàna ireo mpisetrasetra mitaingina môtô mpigoka anfetamina, fitaovan'ny RIFOMB fitondran'ny tafika sy mihoatra ny maha-olona.
Ao anatin'ilay sarimihetsika, tamin'ny 16 Jolay 1988 no nitranga ilay fipoahana nampididoza izay niteraka ny Tokyo Vaovao. Ao anatin'ny tontolo tena izy, tamin'io daty io ihany koa no namoahana voalohany ilay sarimihetsika ary dia nankalazaina erantany io tsingerintaona io, isan'izany i Japana.
Tratry ny tsingerintaona faha-30 nahaterahana ry AKIRA 🥳🎂
😍#AKIRA #アキラ #AKIRA_Animation_30th_Anniversary pic.twitter.com/mLopBI1RY7
Tamin'ity andron'ny 16 Jolay 1988 ity, nopotehin'i Akira ilay Tokyo tany ampiandohana. Sarimihetsika iray be mpanoro, klasika iray tsy manam-petra sy asa kanto manontolo
Ao anatin'ny fankalazana an-tambajotra erantany eo ambanin'ny tenifototra #AkiraWeek, namokatra andiany iray tamin'ireo lahatsoratra natokana ho an'i Akira ny Japan Times, notarihin'ilay mpanoratra kolontsaina pop Matt Schley. Tao anatin'ny iray tamin'ireo lahatsorany amin'ilay andiany, hazavain'i Schley amin'ireo mpamaky Japan Times ny fomba hitenenana japoney sahala amin'ny an'ny punk iray mpitaingina môtô , amin'ny alalan'ny fanomezana voambolana fototra ilaina mba hanampiana amin'ny fahatakarana ilay sarimihetsika.
Io sarimihetsika io, sy ny manga izay nanainga fanahy azy, dia voalahatra hiseho ny taona 2019, daty izay nahapotika an'i Tokyo tamin'ny 新型爆弾 (shingata bakudan, karazana baomba vaovao) izay nanomboka ny 第三次世界大戦 (Daisanji Sekai Taisen, Ady Lehibe Faha-3). Namboarina ho ネオ東京 (Tokyo vaovao), feno mponina mpanao politika mpanao kolikoly ilay tanàmbe, nisy ireo revolisionera, 超能力者 (chōnōryokusha, ireo izay tanjaka ara-tsiana sy fanahy) sy ireo zatovo 暴走族 (bōsōzoku, jiolahim-boto mpitaingina môtô).
Ao anaty lahatsoratra hafa mikasika an'ireo andiany ireo, hazavain'i Schley ny sasantsasany amin'ireo lafiny teknika izay mahatonga ny famokarana ny Akira ho mitondra zava-baovao
Nolokoina tamin'ny fomba dizitaly ny “Akira” – dingana iray revolisionera tamin'ny androny – teo amin'ny solosaina iray nampiasa processeur 12 megahertz sy fitaovana iray vita tanana ho fanapariahana hafanana izay, hoy ny nosoratan'i Oliff, mitretrena sahala amin'ny fiarabe tranainy fampiasan'ny tantsaha”. Tamin'ny voalohany, nalefan'ireo mpandoko tany amin'i Otomo ireo vakiraoka mba hakàna fankatoavana, saingy nony farany, nilaza tamin'i Oliff ny mpamorona an'i Akira fa mahatoky tanteraka azy izy. Tao anatin'ny fotoana iray nahaliana nifanenàn'ny kolontsaina, ny andiany voaloko nampitolagaga dia navadika ho Japoney ary navoaka tao Japana fotoana fohy taorian'izay.
Ho an'ireo mpankafy marobe, Ny endrika virtoaly hitamaso amin'ilay sarimihetsika no mahatonga an'i Akira ho tsy hay adinoina.
Sanganasa iray tonga lafatra i AKIRA (1988). Tena mampitolagaga tanteraka ny halehiben'ny asa marobe natao nanatontosana an'ireo andiany sy ireo asa tany ambadika. pic.twitter.com/yOdyJywA9B
Ao anaty zotrana adihevitra iray miely be ao amin'ny Twitter, iray amin'ny mpankafy Akira no nijery akaiky izay mahatonga ilay sarimiaina ho lasa lahatsary tena mahasarika.
Ekena, ndeha ho tomorintsika akaiky ireo andrana sasantsasany tamin'ny pensilihazo avy amin'i Akira! Jereo ity sary fanarahamaso tsy mampino ity! Ilay tonelina! Tambazako fa maro ireo olona no mihevitra fa 3D CGI io nefa TSIA. Natao tanana io! #Akira #Akira30 #アキラ #PencilTest #2DAnimation #Sakuga pic.twitter.com/Vf92OKkvZn
Misy sarimiaina ampolony maro samihafa samy mahaliana tsirairay avy mandalo eto, saingy ireto tena mifanaraka tsara. Tena malefaka avokoa ireo fihetsika rehetra, saingy ireo vokany nafangaroharo dia tena mampikorontandrotana tsy mampino .#Akira #Akira30 #アキラ #PencilTest #2DAnimation pic.twitter.com/L5XgYvmmqc
Nipoitra ihany koa ireo fampirantiana ampahibemaso an'ireo manga sy ny lahatsarinà sarimiaina, sahala amin'izay voamariky ny mpampiasa Twitter iray hafa:
Screentone iray an'ny Testuo goavana (ny mpisehatra lehibe ao anatin'ny famokarana andiana manga sy ny lahatsary ampiainina) ao Shibuya (ao Tokyo). Heveriko fa tiako, izaho tenako, ny teknika fanaingoan'i Moiré.
Ho an'ny olona marobe eran'izao tontolo izao, mitohy manainga fisaintsainana ny tantara sy ireo fotokevitra avy ao amin'ny Akira.
“Tamin'ny taona 1988, toa ny zavatra tsy nisy dikany tsy mbola fahitako hatrizay i Akira. Lava izay, nefa vetivety tsy mampino. Ary amin'ny farany, tsy manan-kevitra mihitsy aho momba izay resaka tao anatiny sy izay nataoko tany am-boalohany.” @DavidBennun tanatin'ireo 30 taona nanaovana asa goavana.https://t.co/hni0NJCEyv pic.twitter.com/MWA5bbB505
Tao anatina andrana iray ho fankalazana ny faha-telopolo taonan'i Akira, hoy ny mpanoaratra iray, David Bennun, hoe:
Izay fantatro ankehitriny dia samihafa tamin'izany ary koa ankehitriny ao Japana. Noho ny antony tsotra sy tsara hoe toa izany i Japana ary mbola ilay firneena tokana hany niaina marina ny atao hoe ady nokleary – ary tsy misy azontsika atao afatsy ny mijanona anaty fanantenana.
Afaka mitrandraka fanehoankevitra bebe kokoa mikasika an'i Akira ianao amin'ny fampiasàna ireo tenifototra #アキラ, #Akira, #Akira30, sy #AKIRA_Animation_30th_Anniversary.
Ho fandinihana tsara ny korontana sy ireo mpilalao ao amin'ny Akira, ity ny tapaka lahatsary dokambarotra amin'ny teny anglisy nataon'ireo mpankafy ilay sarimihetsika